Ejila 'nkpuchi na -ezighi ezi' n'ụgbọ okporo ígwè Eurostar!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na France » Ejila 'nkpuchi na -ezighi ezi' n'ụgbọ okporo ígwè Eurostar!
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ kacha ọhụrụ na France • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Rail njem • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị uwe ojii France na -ewepụ onye njem Britain na -enupụrụ isi nke yiri 'ụdị nkpuchi' na ụgbọ oloko Eurostar, jide ya, mgbe nkwụsị mberede kwụsịrị na Lille.
A manyere ụgbọ oloko Eurostar ịkwụsị mberede na Lille, France maka ndị njem na-anaghị erube isi.
Ewepụrụ onye njem ụgbọ oloko Britain na ụgbọ oloko, jidere mgbe ya na onye njikwa ụgbọ oloko Eurostar rụchara.
Onye njem ahụ ghọrọ onye na-eme ihe ike ma na-eyi egwu n'akụkụ ndị ọrụ nọ n'ụgbọ, yabụ akpọrọ ndị uwe ojii.
Ndị uwe ojii ji ngwa agha wepụrụ onye njem ebubo ebubo iyi 'ụdị mkpuchi' na ụgbọ oloko Eurostar mgbe ọ kwụsịrị nkwụsị mberede na Lille, France n'abalị Thursday.
The Ụgbọ oloko Eurostar na -eme njem site na Paris Gare du Nord na St. Pancras n'ehihie Tọzdee mana a manyere ya ịkwụsị ọnọdụ mberede na Lille mgbe onye isi ụgbọ oloko kwuru na ya na onye njem Britain si na arụmụka kpụ ọkụ n'ọnụ. Liverpool n'elu nkpuchi ihu ya, dị ka ndị njem ụgbọ oloko si kwuo.
N'ịgbaso esemokwu ahụ, onye njikwa ahụ kwuru na ha ga-agwa ndị uwe ojii na Lille maka enweghị ike ịgbaso ụkpụrụ COVID-19, ụgbọ oloko ahụ na-eme ihe mberede, nkwụsịghị oge a na-akwụsị na ọdụ ụgbọ elu ebe ndị isi asatọ jiri ike wepụ onye njem ahụ.
Ka ọ na -apụ n'ụgbọ oloko ahụ, Briten, onye echere na ọ dị afọ iri anọ na ụma, kwuru na e boro ya ebubo na ọ "eyighị ụdị nkpuchi kwesịrị ekwesị" na ugbu a "a ga -ahapụ ya naanị na France," na -akpọ ya "mmeso obi ọjọọ."
Onye nkwuchite okwu Eurostar gbachitere nzaghachi ọnọdụ ahụ, na-azọrọ na "onye njem ahụ ghọrọ onye na-eme ihe ike ma na-emenye ndị otu nọ n'ụgbọ ahụ" mgbe ha chetaara ya iwu ha maka iyi nkpuchi na, n'ihi nke a, "a gwara ya ka ọ hapụ ụgbọ oloko na ọdụ Lille. . ” N'ikwekọ na "usoro nkịtị" ụlọ ọrụ a kpọrọ ndị uwe ojii "ka ha bịa nyere aka."
Ndị uwe ojii France kwenyere na ejidere nwoke ahụ maka ihe mere n'ụgbọ oloko mana enyeghị mmelite ọzọ na ọnọdụ ahụ.
Eurostar na -ekwupụta na webụsaịtị ya na ndị njem niile ga -eyi ihe mkpuchi ihu na ụgbọ oloko ya, ọbụlagodi ma a gbaa ha ọgwụ mgbochi, yana ndị na -anaghị erube isi nwere ike ịjụ njem. Ntụziaka ụlọ ọrụ ahụ ekwughị ụdị nkpuchi a chọrọ, naanị na ọ ga -ekpuchi ọnụ na imi nke ndị njem.